प्राय: सोधिने प्रश्नहरू - ASFO Store
अनलाइन खरीदको फाइदा के हो?
अनलाइन खरीद गर्नका थुप्रै फाइदाहरू छन्: तपाईं कुनै पनि समय वा दिनमा आफ्नो खरीदहरू गर्न सक्नुहुनेछ (२ hours घण्टा / 24 दिन प्रति हप्ता / प्रति वर्ष7365 दिन); उत्पादनहरू तपाईको घर मा आदेश वा वितरण को लागी तपाइँ सूचित गर्नुहोस्; कम मूल्य र विशेष प्रचारहरूको पहुँच गर्न अनौंठो अवसरहरू; हाम्रो डाटाबेस मार्फत, र तपाईंको पहिलो खरीद पछि, खरीद प्रक्रिया भविष्यका खरीदहरूको लागि सहज बनाइएको छ।
खरीद गर्न वेबसाइटमा दर्ता गर्नु अनिवार्य छ?
होइन। दर्ता गर्न अनिवार्य छैन, तर यसले तपाईंलाई अनौंठो लाभहरू दिन्छ! अभियान र विशेष अफरहरूको पहुँच: तपाईंले तपाईंको पंजीकरण ईमेलमा कुपनहरू, प्रस्तावहरू, छुटहरू र समाचारहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ! द्रुत खरीद: केवल एक पटक हाम्रो सदस्यता फारम भर्नुहोस्, भविष्य खरीदहरूमा वा तपाईंको डाटा स्वचालित रूपमा दर्ता हुनेछ। अर्डर ईतिहास: तपाईं सधैं आफ्नो खरीदहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
म के किन्न सक्छु?
हामी फार्मेसीमा सामान्य रूपमा उपलब्ध सबै उत्पादनहरु का व्यावसायीकरण गर्छौं: प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स; ओभर-द-काउन्टर औषधीहरू, कस्मेटिक र स्वास्थ्यजन्य उत्पादनहरू, फूड सप्लीमेन्टहरू, हड्डी रोग, अन्यमा। यदि तपाइँ आफूलाई चाहिएको फेला पार्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
के स्टोरले चलानी पठाउँदछ? यदि तपाइँ आफूलाई चाहिएको फेला पार्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
प्रत्येक अर्डरको साथ खरिद गरिएका उत्पादहरूको इनभ्वाइस पठाइन्छ।
म कसरी निश्चित छु कि मेरो अर्डर प्राप्त भएको छ?
जब तपाईंको अर्डर समाप्त हुन्छ, तपाईं एक स्वचालित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई सूचित गर्दैछ कि यो पहिले नै प्रक्रियामा छ।
के बिलि address ठेगानाबाट फरक ठेगानामा अर्डर प्राप्त गर्न सम्भव छ?
हो। खरीदको क्रममा निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्: पृष्ठमा जहाँ खरीद समाप्त हुन्छ "विभिन्न ठेगानाहरूका लागि पठाउनुहोस्" विकल्प चयन गर्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको अर्डर प्राप्त गर्न चाहानुभएको ठेगानामा स indicate्केत गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाले बिलि address ठेगाना परिवर्तन गर्दैन।
त्यहाँ न्यूनतम आदेश मान छ?
कुनै न्यूनतम अर्डर मान छैन।
मैले कसरी थाहा पाउनु पर्छ कि मैले कति तिर्नु पर्छ?
खरीद प्रक्रियाको अन्त्यमा, र प्रिस्क्रिप्शन बिना हल्का उत्पादनहरू / औषधिहरूको मामलामा, प्रणालीले भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्यमा सूचित गर्दछ, जसमा कुनै पनि छूट र हुलाक समावेश हुन्छ (यदि लागू हुन्छ) अनिवार्य प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स प्राप्त गर्दा, तपाईं पछि अन्तिम मानको साथ ईमेल प्राप्त गर्नुहोस्, जसमा सह-सहभागिता र छुटहरू समावेश हुन्छन्।
के यो वेबसाइटको लागि भुक्तानी गर्न सुरक्षित छ? के व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित छन्?
Sousa Torres SA फार्मेसी एक कडा गोपनीयता नीति को पालना गर्दछ। तपाईको डेटा कुनै पनि परिस्थितिमा तेस्रो पक्षलाई तपाईको ज्ञान र सहमति बिना प्रदान गरिने छैन। Https: // ढाँचा को उपयोग जानकारी र डाटा अनलाइन स्थानान्तरण को सुरक्षा को ग्यारेन्टी गर्दछ।
के म मलाई उत्तम लाग्ने तरीकाले तिर्न सक्छु?
यो ध्यानमा राख्दै कि भुक्तानी विधि छनौट गरिएको वितरण मोडमा निर्भर गर्दछ, सम्भव भुक्तानी विकल्पहरूमा, तपाईं एक उपयुक्त छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हो।
के यो क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्न सुरक्षित छ?
जब तपाईं भुक्तान जानकारी भर्नुहुन्छ, तपाईंको ब्राउजर र Hipay, भुक्तान लेनदेन बनाउने कम्पनी बीच एक सुरक्षित लिंक स्थापित हुन्छ। प्रयोग गरिएको सर्भर सुरक्षित ईन्क्रिप्शनको साथ, भुक्तान डेटाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न उनीहरू डाउनलोड हुने बित्तिकै छ। क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानीमा, कार्डधारकको नाम अनुरोध गरिनेछ, म्याद सकिने मिति एक सुरक्षा कोड हो, कार्डको पदमा कार्डको हस्ताक्षरका लागि आरक्षित स्थानको दायाँपट्टि फेला पर्दछ। होल्डर, तीन अंक समावेश, CVV (प्रमाणिकरण कोड)। यो खरीद प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित बनाउँदै, हामीलाई आवश्यक पर्दछ कि क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा सुरक्षा कोड (CVV) को or वा digit अंक डायल गर्नुहोस्। कोड कार्डको अंश भएको कारण कुनै पनि धोखाधडी प्रयास सुरक्षित रूपमा रोकिन्छ।
म कसरी अर्डर रद्द गर्न सक्छु?
यदि तपाइँ यो गर्न चाहानुहुन्छ, यो छिटो भन्दा छिटो गर्नुहोस्। रद्द ग्यारेन्टी गर्न, यदि तपाइँ प्रेषकको लागि अझै छ भने यकिन गर्न ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यदि यो पहिले नै जारी भइसकेको छ भने, रद्द गर्न विचार गर्न सम्भव छैन।